Salaamanews » Ciidamada huwinta ah oo billaabay dagaal jubada hoose iyo Gedo looga saarayo Al-shabaab
Home » Warar Ciidamada huwinta ah oo billaabay dagaal jubada hoose iyo Gedo looga saarayo Al-shabaab Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 5th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Puntland oo furtay xarun dalxiis (Sawirro)Prof. Jawaari oo ballan qaaday waxqabad ay la imaan doonaan baarlamaankaSiyaasiga Yuusuf Xasan oo helay kursiga Kamukunji Dowladda Turkiga oo ballan qaaday dib u dhis ay ku sameyso Aqalka Golaha Shacabka iyo Xarunta HooyooyinkaTalyaaniga oo Soomaaliya ballan qaadyo u sameyey (Daawo kulanka labada wasiir)
Sida ay sheegayaan wararka ciidamada oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wada deegaano aan sidaa uga fogeyn Baardheere, halkaasoo difaacyo ay ka samesyteen.
Diyaad Cabdi kaliil oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay in qorshahooda yahay inay gaaraan degmooyinka Buurdhuubo iyo Baardheere.
“Qorshe ciidan waaye, ilaa berri waxaan rajeyneynaa inaan gaarno Baardheere, Buurdhuubo iyo Baardheere waa labada degmo kaliya ee kooxaha nabad diidka ku hareen”ayuu yiri Mr Kaliil.
Ciidamada Itoobiya ayaa maalmihii u dambeeyay waday dhaq dhaqaaqyo ciidan oo aad u ballaaran, kaasoo ku wajahnaa deegaanada Gedo kaga sugan yihiin Xoogaga Al-Shabaab.
Degmooyinka Buurdhuubo iyo Baardheere ayaa ahaa labada degmo ee gacanta Shabaabka ku sugnaa, waxaana labadii sano ee u dambeeyay ka baxay gacantooda degmooyin dhowr ah.
Dhanka kale Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo gacan ka helaya milateriga Kenya ayaa saaka ka baxay magaalada Afmadow si ay howlgallo lagu sifeynayo Al-Shabaab uga sameeyaan deegaanno ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
Gaashaanle dhexe Fatxi Xuseen Cabdi oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ee Jubbada Hoose ayaa sheegay inay ciidanku ku wajahan yihiin deegaannada Xagar, Hargeysa Yarey iyo Qalaawila oo uu sheegay inay ku dhuumaaleysanayaan haraadiga maleeshiyada al-Shabaab.
Wuxuu sheegay inay howlgalladu socon doonaan tan iyo inta laga xaqiijinayo in deegaannada gobolka Jubbada Hoose aanay joogin ciidamada ururka Al-Shabaab.
Tags: warar « Qoraalkii HoreTwo Somalis die in attack on refugee camp in Kenya	Qoraalka Xiga »Dabley hubeysan oo weerartay wasiirka amniga Puntland	Halkan Hoose ku Jawaab